सहमती हुनैलाग्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी गरे पछि झस्कियो नेपाल समूह, अब के गर्ला ? - News20 Media
सहमती हुनैलाग्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी गरे पछि झस्कियो नेपाल समूह, अब के गर्ला ?
May 15, 2021 N20LeaveaComment on सहमती हुनैलाग्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी गरे पछि झस्कियो नेपाल समूह, अब के गर्ला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली माधव नेपालसँगको सहमति गर्दा ब्याक भएको भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरे ।
बरु, नेता नेपालहरुले एमालेमा फर्कने भनेर रियलाईजेशन गरेकोले सहमति भएको उनको भनाई छ । उनले नेपाल पक्षसँग ०७५ जेठ २ गते फर्कने भनेर सहमति नभएको पनि जिकिर गरे ।
त्यस्तै, फागुण २८ गतेको निर्णय र त्यसपछिका बैठकका निर्णयपनि कुनैपनि हालतमा फिर्ता नहुने दाबी गरे । हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरुसँग विश्वासको मत मागिरहेको बताउँदै विश्वासको मत नपाए मुलुक चुनावमा जाने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदमा विश्वासको मत नपाए मुलुक निर्वाचनमा नै जाने उनको भनाई छ ।
उनले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई सरकारमा ल्याउनको लागि प्रयत्न भैरहेको पनि सुनाए । माधव नेपाल पक्षधर नेताहरुले अब एमालेमै फर्कने भनेर रियलाईजेशन गरेकोले नै सहमति भएको उनको टिप्पणी छ ।
यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएर पार्टीको समस्या समाधान गर्नेबारे सहमतिमा पुगिएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रवार भएको छलफलमा सहभागि नेता विष्टले जेठ २ मा फर्किने सहमति भएको बताएका हुन् ।
‘जेठ २ मा फर्किएर पार्टीको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ, त्यसको लागि कार्यदल बनाएर मोडालिटी बनाउने सहमति भएको छ’ विष्टले भने । माधव नेपाल पक्षले जेठ २ गतेमा फर्किने विषयलाई बटमलाइन बनाउँदै आएको छ ।
राप्रपाको यस्तो निर्णय पछि एमालेमा ल्यायो तरङ्ग, ओली र थापा बिच भयो यस्तो सहमति
भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को उपाधी कोच प्रमोदको दाउमा पर्ने संकेत।।को बन्ला त बिजेता?हेर्नुहोस ‘शो’ को नियम।
प्रधानमन्त्रीको किकआउट सुरु, बादल सहित ७ मन्त्रीको पद खारेज (हेर्नुहोस् नामावली सहित)
June 6, 2021 N20